प्रेमिल परिकारका लागि नेपालमै पहिलो क्याफे अम्पायर, दरबार मार्गमा
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । प्रणय दिवसले घरको साँघार तोडिनै सकेको छ । नयाँ जमानाका युवा यवती त के हजुरबा हजुरमा पनि ‘ह्यापी प्रेम दिवस’ भन्न थालेका छन् ।
आखिर सफा, स्वस्थ र कलंक रहित मायाका लागि को लालयित नहोला र ! प्रेम भन्ने बित्तिकै मन नपराउने पनि कोही होला र !
प्रेम भन्ने बित्तिकै आँङ सिरिङ हुनेदेखि मनैमन कुत्कुतिनेहरु यहाँ को छैन र !
तपाई आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकालाई ‘ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे’ भन्ने हिम्मत बटुल्दै गर्दा हातमा कि त प्रणय दिवस झल्काउने कार्ड लिएर उसका अगाडि प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ, कि त गुलाबको फूल बोकेर ।
अब सोच्नुहोस्, त्यही गुलाबी आकृतिमा मिठाइका परिकार र चकलेटहरु पाउनु भयो भने तपाई गुलाब हातमा दिन थाल्नु हुन्छ कि मुखमै लगेर मिठाइ खुवाउन थाल्नु हुने छ ?
गुलाब, जामुन, लड्डु पेडा मात्र किन, आजकल सहरमा चलेको ‘ममः’ पनि गुलाबी आकृतिमा पाउनु भयो भने, तपाई गुलाबी मम खुवाउन आफ्नो प्रिय मानिसलाई कहाँ लैजानु हुन्न होला र ?
धेरैलाई थाह नहुन सक्छ कि ‘भ्यालेन्टाइन दिवस’ का लागि खाने परिकारहरु पनि गुलाब आकृतिमा पनि पाइन्छन् भनेर । सायद, नेपालमै पहिलो प्रयोग गर्दैछ अम्पाएर क्याफे, दरबार मार्गले ‘मम’ पनि गुलाबी आकृतिको बनाएर ।
रोज ममः भ्यालेन्टाइन डे स्पेसल
यहाँ बन्ने कफीदेखि लिएर मम, प्राउन, फ्राइड राइस, भेजटेबल्स त के हरेक खाने परिकारहरुमा भ्यालेन्टाइन डे स्पेसल ब्रान्ड छाप लगाइन थालिएको छ । रोज मम खान भनेर भ्यालेन्टाइन डे आउनु भन्दा हप्ता दिन अघिदेखि केटा केटीको आइरो लाग्न थालेको छ ।
कलर कम्पोजिसन पनि प्राकृतिक
अचम्म लाग्दो के छ भने, हाम्रो समाजमा आमको मुहार हेर्नेदेखि बाबुको मुहार हेर्ने र आफ्नो मुख फेर्नेसम्मका सबै मिठाइ आइटमहरु सजाउन कृत्रिम कलर प्रयोग गरिन्छ ।
तर, अम्पाएर क्याफे, दरबार मार्गले यी सबै आइटमहरुमा जुन ‘कलर’ अर्थात् रङ प्रयोग गरेको छ, ती सबै गाजर, मुला, सलगम र अन्य फलफूलको धुलो प्रयोग गर्छ भनेको सुन्नुभयो भने त तपाई अझै खुसी हुनुहुन्छ पनि होला ।
आखिर यहाँ स्वस्थ माया मात्र हैन, खानेकुरा पनि ज्यानको स्वास्थ्य बिगार्ने हुन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गरेको अम्पाएर क्याफेले भ्यालेन्टाइन डे विशेष परिकारहरु– रोज मम, रोज फ्राइड राइस, रोज क्याप्सिकन भेजटेबल्स, रोज कफी, रोज प्राउन, मुटु र गुलाबी आकृतिका हेरक परिकारहरु बाहिर ल्याएको छ ।
यदि तपाईलाई पत्यार लागेन भने, वा रोज मम कसरी बनाउन सकिने रहेछ भन्ने जान्न मन लाग्यो भने पनि, अम्पाएर क्याफे दरबार मार्गसम्म जानु पर्ने त भयो ।
प्रणय दिवसलाई विशेष रुपले मनाउने सोच छ भने त भन्नै परेन । अघि पछि खाएको भन्दा फरक मुटु, माया, प्रेम र प्रणय देखाउने खाना खान पनि नेपालमै पाइने भएको छ ।
हुन पनि अरुबेला ६० रुपियाँ पर्ने गुलाब यतिबेला डेढ–दुई सय पर्ने भएको छ । प्रणय दिवसकै लागि भनी ८० प्रतिशत गुलाब भारतबाट नेपाल आउने गरेको छ । महँगो गुलाबमा पैसा हाल्ने कि गुलाब जस्तै स्वास्थ वद्र्धक मम त्यो पनि गुलाब ममका लागि पैसा खर्चियो भने त एकै साथ माया र एकै साथ मम पाइने भयो । माया लाउन र मम खान पाउने भए पछि कस्ले गर्दैन प्रेम !
ठमेलमा पनि नपाइने रोज ममले हजारौं जोडीको मन तानिरहेको छ ।
तस्विरमा रोज परिकार